I-10 yexabiso eliphambili leamazon prime ongazazanga malunga ne (2021)
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-10 yexabiso eliphambili leAmazon Prime ongazaziyo malunga ne (2021)
I-10 yexabiso eliphambili leAmazon Prime ongazaziyo malunga ne (2021)
Ukuba ubhalisile kwi-Prime Prime yaseAmazon, kukho izizathu ezibini okanye ezimbini eziphambili zoko. Ewe, eyona idumileyo iya kuba zizibonelelo zokuhanjiswa, ekuvumela ukuba ukhethe kwizigidi zezinto ezihanjiswa emnyango wakho ngeentsuku ezi-1-2, okanye kwangolo suku lunye! Kuxhomekeka ekubeni uzisebenzisa kangaphi ezi nkonzo, kunzima ukuxelela ingaba ubulungu beAmazon Prime bufanelekile .
Fumana iNkulumbuso yeAmazon ngoku, kubandakanya uvavanyo lweentsuku ezingama-30 zasimahla!
Esinye isizathu sokuba lilungu yiVidiyo yeNkulumbuso, apho unokufumana khona awona manqaku athandwayo nathandwayo njengoNkskz. Maisel, Amakhwenkwe, kunye nezinye ezakudala ezinje ngabahlobo, iOfisi, kunye nezinye ezininzi.
Ezinye zeefilimu ezithengisa kakhulu kule minyaka imbalwa idlulileyo zikhutshwe ngokukodwa kwiVidiyo yeNkulumbuso. Umzekelo, ukulandelelana kweBorat ekudala ilindelwe ye-Borat elandelayo ye-Moviefilm yayinabo bonke ababoneleli beenkonzo eziphambili zokusasaza belwela amalungelo efilimu. Ngokweengxelo, uJeff Bezos kunye nenkampani baphumelele ibhidi ngokuhlawula intloko-ejikeleza i-80 yezigidi zeedola. Ngenxa yokuba umphathi weAmazon & apos yindoda esisityebi emhlabeni, ngokuqinisekileyo sinokulindela ngakumbi iibhlokhi ezizodwa eqongeni.
Nangona sicinga ukuba uninzi lwenu luyazi ukuba yintoni Inkulumbuso yiyo, enye ayenzi & sayina i-Amazon Prime ukufumana ukufikelela kwi-Prime Day yodwa-ke kulula ukuba uyilibale ngayo! Qho ngonyaka ukusukela ngo-2015 iAmazon inikezela ngeentengiso ezintle kwiifowuni zakho ozithandayo, iipilisi, izinto zokunxiba kunye nokunye okuninzi. Iimpawu ziquka apile , Isamsung , Bose, Isony , kwaye kunjalo, izixhobo zeAmazon ezizezabo. Kuya kubakho kwakhona Idili elikhulu kwiiTV . Ngokuqinisekileyo, a ULWESIHLANU omnyama -imnyhadala, ongafanele uwuphose, ukuba ulilungu eliyintloko. Inkulumbuso yalo nyaka kulindeleke ukuba ibekho ngoJuni.
Ukuhanjiswa kwe-Prime, iVidiyo eyiNtloko, kunye ne-Prime Day zezona nkonzo zidumileyo nezona zibalulekileyo ezinikezelwa ngobulungu bakho, kunye nesizathu esikhulu sokubhalisela iNkulumbuso.
Nangona kunjalo, singathanda ukukunceda ufumane konke okungcono kuyo yonke into iNkulumbuso enikezela ngayo, yiyo loo nto sikhethe izibonelelo zeAmazon Prime esiyithandayo, onokuthi ungaqhelani nayo! Zidweliswe kungekho myalelo, kodwa siqinisekile ukuba uya kuthatha isigqibo sokuba zeziphi ezona zixabisekileyo kuwe.
1. Umculo weAmazon
Ngokuqinisekileyo, akunjalo Umculo waseAmazon Unlimited, ekunika ukufikelela kwiingoma ezingama-70 ezigidi, kodwa makhe usasaze iingoma ezizizigidi ezi-2 kunye neepodcast kwimfuno. Ilungele abaphulaphuli abaqhelekileyo, kwaye ngekhe ungaze uphinde uphucule kwi-Unlimited ukuba ulawula ukufumana onke ama-albhamu akho owathandayo kuhlobo olusemgangathweni losetyenziso. Okwangoku, ukuba ufuna ukubhaliselwa kwepremiyamu ngenkonzo yokusasaza, jonga eyethu Mega iinkonzo zokusasaza umculo ukufumanisa ukuba yeyiphi eyona ilungele wena.
2. Iifoto zeAmazon
Siphila ngoku siphila kwixesha lamafu. Kuyinto elula kwaye emangalisayo! Backup kwaye wabelane ngeefoto zakho ngokungenamkhawulo, ukugcinwa kwesithombe esigcweleyo. Unokongeza imifanekiso yakho kwiifoto zasimahla zeAmazon app I-Android / ios nakwi-intanethi kwaye uzijonge kuzo zonke izixhobo zakho naphi na emhlabeni. Akukho SSD, i-flash drive, okanye imemori khadi efunekayo. Ngaba siyikhankanyile loo nto & SIMAHLA!
3. Yabelana ngeenzuzo zakho zeNkulumbuso
Ngaba ubusazi ukuba unganxibelelana neakhawunti yakho kunye nomnye umntu omkhulu ukuze wabelane ngee-shipping, usasaze ukufikelela kwiimovie / iinkqubo zeTV, ukuFunda okuPhezulu, kunye neeFoto zeNkulumbuso? Ukuba awukwenzi oko, wamkelekile! Ngoku ungahlulahlula iindleko zobulungu bakho bokuqala kunye nomntu ohlala naye ngaphandle kokuziva uphangiwe ngokwabelana ngephasiwedi yakho simahla! Ngapha koko, abafundi bafumana isaphulelo, ngenxa yoko bubiwe ngokwenene.
4. UkuFunda kuqala
Ifakwe ngokuzenzekelayo kubulungu bakho beAmazon Prime, ukuFunda kweNkulumbuso kuvumela ikhadi lakho lethala ukuba liphumle endaweni yelayibrari yabucala ngokukhetha iincwadi kunye neemagazini ezingaphezu kwe-1000. Le ikwabelwana ngayo ekhayeni lakho, okuthetha ukuba ungabelana ngeakhawunti yakho yokufunda kunye namalungu osapho okanye nabahlobo. Izihloko ezidumileyo zibandakanya uHarry Potter kunye noMlumbi kunye nelitye likaJK. Rowling kunye neGadi Butterfly nguDot Hutchison. Ukufunda kukuvumela ukuba umamele iincwadi zomsindo ngaphandle kwesidingo sobhaliso oluVakalayo!
5. I-Prime Wardrobe
Yinto elula leyo: Uya-odola, kwaye uzame iimpahla, izihlangu, ubucwebe kunye nezinto zokusebenza ekhaya. Kuphela emva koko uthatha isigqibo sokuba ungathanda ukuhlawula kwaye ubagcine, okanye ubathumele ngokulula kwiAmazon. Zappos 'runlimited' kwii-steroids. Sibona oku kuluncedo kubathengi abanomdla, kodwa nakubantu abanokuhamba okulinganiselweyo, abangakwaziyo ukuya evenkileni. Ngokuqinisekileyo ilungile!
6. Ukuhanjiswa kwivenkile yokutya simahla
Wakhe waphupha usenza ivenkile yakho yokuthenga usuka kwintuthuzelo yekhaya lakho? Nge-Prime, unako. Kuya kufuneka uthenge kwiAmazon entsha okanye kwiNtengiso yokuTya konke, kodwa nangona kunjalo, yinkonzo enokugcina usuku!
Gcina ukhumbula ukuba njengoko imile le ifumaneka kuphela kwizixeko ezili-15 zase-US: iAtlanta, iBaltimore, iBoston, iChicago, iDallas, iDenver, iLas Vegas, iLos Angeles, iMiami, iNew York, iPhiladelphia, iSan Diego, iSan Francisco, iSeattle, kunye neWashington DC
7. Isitshixo ngeAmazon
Le nto ayicacanga ukuba ujonga isihloko, kodwa into eyenzayo iyamangalisa ngokwenene. 'Isitshixo' sikuvumela ukuba ufumane iiphakheji zeAmazon ngokukhuselekileyo ngaphakathi kwekhaya lakho, igaraji, okanye kwitraki yemoto yakho - zilungele abo basendleleni. Kukhuselekile nako. Ungajonga inqanaba lomnyango wethu kwaye ujonge ukuhanjiswa ngqo kwiNgundoqo ngeAmazon App.
8. Ama-Amazon abantwana +
Eyayisaziwa njenge Ixesha lesimahla elingenamkhawulo , Ama-Amazon abantwana + kukunika ukufikelela okungenamkhawulo kumawaka eencwadi ezenzelwe abantwana, iimuvi, iinkqubo zeTV, iiapps zemfundo, imidlalo, kunye nezakhono zomntwana zepremiyamu. Ngelishwa, kule meko kusafuneka ubhalise ngokwahlukeneyo, kodwa amalungu eNkulumbuso afumana isaphulelo sama-40%, esizisa ixabiso kwi- $ 2.99 nje ngenyanga!
9. Izinto zokuncedisa ukuva ezivakalayo
Ewe, njengoko usazi, Kuvakala ukuba yinkampani yeAmazon. Amalungu eNkulumbuso afumana naziphi na izihloko ezibini simahla kuvavanyo lwePrimiyamu ePhambili kunye nokuthenga. Ukuba awulilo ilungu leNkulumbuso, ufumana elinye kuphela. Ngaphaya koko, Ikhathalogu eVakalayo kunye nokunika ukufikelela kwiipodcast, impilo ekhokelwayo, kunye neeVenkile eziVakalayo!
10. Isimahla, ukuhambisa ngokukhawuleza kuzo zonke iiodolo zeZappos
NjengokuVakalayo, Woot! kunye neTwitch, iZappos ikwangumnini weAmazon! Ke ngoko, ufumana izinto ezizodwa ezinxulumene nee-odolo zakho apho. Ufumana 'isiqinisekiso esingenamkhawulo' seentsuku ezingama-30, ekuvumela ukuba unxibe izihlangu zakho kangangeentsuku ezingama-30 ngaphambi kokuthatha isigqibo sokuzigcina; Ukuthumela ngenqanawa; Umfundi we-10%, utitshala, kunye nesaphulelo somkhosi, kunye nokunye.
Ubulungu bakho beAmazon Prime ayisiyo bhaliso kuphela lokuhambisa olwenzekayo kukuvumela ukuba ubukele ezinye zeemovie zakho ozithandayo kwiVidiyo yeNkulumbuso. Kukuninzi kakhulu! Izibonelelo ezilishumi thina & apos zidwelisiwe ziyamangalisa, kodwa inyaniso ikho nangakumbi. Lilonke, banokukugcinela izixhobo ezininzi!
Umzekelo, iNkulumbuso yeWardrobe lithuba elihle lokonga ixesha ekuthengeni kwivenkile, kwaye siyayazi loo ntoixeshanguimali. Iifoto zeNkulumbuso zinokukugcinela amakhulu eedola, njengoko ungaphumelelanga kwaye ungadingi drive yangaphandle yokugcina iifoto kunye neevidiyo zakho.
Unokufumana ulwazi malunga nazo zonke izibonelelo ezifakiwe kunye nobulungu bakho beAmazon Prime Apha .
Java ayilingani nomtya
moto g 3 amatyala esizukulwane
Idili: I-Samsung Galaxy Tab ye-S3 9.7-intshi enebhokisi yekhibhodi ebiza iindleko ze- $ 500 kwi-B & H
Nazi iiapos zoluhlu lweendleko zesamsung ye-Samsung Galaxy S21
Eyona nto ilula, elula, kunye neyona nto ibalaseleyo yokuqalisa i-Android ngasekupheleni kuka-2020
Isamsung yeNqaku le-8 inokukhutshwa ngendlela ngokukhawuleza kunokuba bekulindelwe (e-US)
I-iPhone 6, i-iPhone 6 Plus kunye ne-Samsung Galaxy S5 isaphulelo kwi-Walmart yeeholide
Ngaba ufuna ukubetha? AbakwaSamsung Gear S2 Classic Rose Gold kunye nePlatinam bazakwazisa ngomso eMelika
Yeyiphi indlela yokugcina i-iPhone 11 ekufuneka ndiyifumene? Ngaba i-64GB yanele?
I-T-Mobile ityhila ngeyona nto ibalaseleyo yokuhanjiswa kweGoogle Pixel 4a 5G eMelika
Uyizisa njani iNqaku le-8 & apos; App Pair screen-shortcuts kuyo nayiphi na ifowuni ye-Android